Neofetch 7.0 yakatoburitswa uye inouya nerutsigiro rwemamwe masystem uye Wayland | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura kuvhurwa kweshanduro nyowani ye chishandiso chakakurumbira chekuratidzira michina uye ruzivo rwehurongwa kuburikidza ne "Neofetch" terminal, inouya neshanduro yayo yakavandudzwa Neofetch 7.0.
Kune avo vasina kujaira Neofetch, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi ndizvo chishandiso chakagadzirwa kugadzira screensavers Console inoratidza iyo inoratidza ruzivo nezve iyo system, Hardware, uye software.
1 Nezve Neofetch
2 Chii chitsva muNeofetch 7.0?
2.1 Maitiro ekuisa Neofetch paLinux?
Neofetch zvakanyorwa mu bash uye nekutadza, chirongwa inoratidza iyo inoshanda system logo, iyo inogona kutsiviwa nemufananidzo unopokana (kumaterminal anotsigira kuratidzwa kwemufananidzo) kana mufananidzo weASCII.
Neizvi isu inokutendera iwe kuti uwane ruzivo rwekutanga nezve iyo yakaiswa system. Kuti uwane rumwe ruzivo rwakakwana, zvinodikanwa kuti ushandise zvakazara zvirongwa.
Ruzivo rwunoratidzwa neNeofetch rwunoitwa kana iwe ukavhura terminal pane yako system, neiyi, yako yekushandisa system logo kana ascii faira inoratidzwa kuitira kuti ruzivo rwekuburitsa rukwirwe.
Chinangwa chikuru chaNeofetch uye zvayakagadzirirwa ndeye kushandiswa nema screenshots. Chaizvoizvo kuratidza vamwe vashandisi iyo inoshandisa system / kugovera iwe yaunoshandisa. Saka nekutarisa, mumwe mushandisi anogona kuona zviri nyore resolution yekombuta, iyo Wallpaper yaunoshandisa, iyo desktop theme, mifananidzo, uye rumwe ruzivo runonakidza.
Izvo zvinoshandiswa zvinotsigira anenge zana masisitimu anoshanda, kubva kuLinux uye Windows kusvika Minix, AIX uye Haiku. Chirongwa ichi chakanyorwa muBash uye chakagoverwa pasi peMIT rezinesi.
Chii chitsva muNeofetch 7.0?
Iyo nyowani vhezheni yeNeofetch 7.0 yakataurwa izvo kodhi yekuchenesa yatanga, kuitira kuti utangise imwe nyowani kodhi yekodhi uye iri nani shell chiitiko.
kunze kwaizvozvo mamwe marogo madiki akawedzerwa, Yakagadziriswa dzimwe nyaya nezvisarudzo zvescreen zvakawanikwa paiitwa shanduko kuwindo.
Nezve masisitimu matsva akagamuchira rutsigiro Icho chishandiso chinotaura kuti rutsigiro rwakawedzerwa rweProxmox VE, BlackArch, Neptune, Obarun, Drauger OS, macOS Catalina, ArchStrike, Cucumber Linux, EuroLinux, Cleanjaro, Septor Linux, Carbs Linux, EndeavorOS uye T2.
Uyewo akaona kuti Regolith desktop rutsigiro yakawedzerwa uye kuti kurongeka kwacho kunosanganisira sarudzo yemakomputa marogo.
Tsananguro yekushanda inopihwa yemaneja windows KWin (KDE) uye Mutter (GNOME) uchishandisa iyo Wayland protocol. Yakawedzera kuratidzwa kwedesktop vhezheni.
Tsigiro yeplasma, yakavhurikaBox uye yakawanda-yekutarisisa kugadzirisa yakagadziridzwa.
Pakupedzisira, imwe itsva inoperekedza iyi vhezheni itsva ndeyekuti iyo tsigiro yemafomati mafomu ekushandisa.
Maitiro ekuisa Neofetch paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa ichi chinoshandiswa pane yako system, vanogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Ndivanaani Debian, Ubuntu, vashandisi veLinux Mint kana chero chimwe chinobva yeaya, ivo vanokwanisa kuisa zvakananga kubva kunzvimbo dzekuchengetedza. Kune izvi isu ticha vhura terminal uye mairi tichaenda kunyora mirairo inotevera:
Panyaya yeavo vari Alpine Linux vashandisi, ingovhura terminal uye nyora unotevera kuraira mairi:
Iye zvino kune avo vanoshandisa Arch Linux, Arco Linux, Manjaro kana chero chimwe chinobva paArch Linux. Kuisirwa kunoitwa zvakananga kubva kuArch Linux repositories.
Kuisa zvinoshandiswa, ingo nyora mune inouraya:
Users of Fedora, RHEL, CentOS, Mageia kana chero chimwe chinobva pane izvi. Ingo nyora mune terminal.
Panyaya yeavo vanoshandisa Gentoo / Funtoo, ivo vanogona kuisa kubva kune yepamutemo Gentoo / Funtoo repositories.
emerge -a neofetch
Kune rimwe divi, kune avo vanoshandisa SoulOS:
Chekupedzisira, kune avo vanoshandisa kuvhuraSUSE Leap kana Tumbleweed:
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve chishandiso uye kumisikidzwa, unogona kubvunza zvinyorwa zvacho Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Neofetch 7.0 yakatoburitswa uye inouya nerutsigiro rwemamwe masisitimu uye Wayland